Ampahany fanaovana kajy. Nampiany, subtracting, nihamaro, mizara fanafody rehetra azo avy.
Ampahany fanaovana kajy dia afaka manao kajy matematika sy ny asa miaraka amin'ny fanafody rehetra azo avy mifangaro isa, toy ny fanampiana, subtracting, nihamaro, subtracting sy fampihenana ny fanafody rehetra azo avy.
Fa fikajiana vola, subtraction, hampitombo sy zarao ny fanafody rehetra azo avy roa, miditra numerator, denominator, integer ampahany amin'ny ampahany, ary hifidy miasa avy amin'ny lisitra. Midira ratsy famantarana amin'ny integer anisan'ny ampahany, raha ilaina.